Onye na-enyere aka ịzụ ahịa ịzụ ahịa: Nnukwu Ọganihu Na-esote na ECommerce?
Thursday, July 11, 2019 Thursday, July 11, 2019 Jake Onyekwere
Ọ bụ 2019 ma ị banye n'ụlọ ahịa ahịa brik na-ngwa agha. Mba, nke a abụghị egwuregwu, nke ahụ abụghịkwa ntụpọ. ECommerce na-aga n'ihu na -ewekwa nsị dị ukwuu site na achịcha ahịa, mana a ka nwere ihe ndị na-enweghị atụ mgbe a bịara n'ihe ọhụrụ na ịdị mma nke brik na ngwa agha. Otu n'ime oke ala ikpeazụ bụ ọnụnọ nke enyi na enyi, onye enyemaka ụlọ ahịa na-enyere aka. "Kedu ka m ga-esi nyere gị aka?" bụ ihe anyị na-anụkarị
Nke a bụ nnukwu ndepụta nke akụkọ ntolite nke Akụkọ Akụkọ na Usoro Ọmụma
Wednesday, October 31, 2018 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Anyị ekenyela edemede gara aga, Ihe niile I Kwesịrị Knowmara Banyere Akụkọ gbasara Instagram, mana kedu ka ụdị eji eji ha eme ka ịchụ ahịa na ire ahịa? Dabere na #Instagram, 1 na 3 nke akụkọ a na-elele anya sitere na azụmaahịa Instagram Akụkọ Statistics: Ndị ọrụ nde 300 na-eji akụkọ eme ihe kwa ụbọchị na Instagram. Ihe karịrị 50% nke azụmaahịa na Instagram mere akụkọ Instagram. N'ime 1/3 nke ndị ọrụ Instagram na-elele akụkọ Instagram kwa ụbọchị. 20% nke akụkọ
Kedu ihe bụ mmetụta nke Micro vs. Macro-Influencer Strategies
Tọzdee, Septemba 14, 2017 Douglas Karr
Infzụ ahịa ahịa dị n'etiti onye ọrụ okwu ọnụ na ị tụkwasịrị obi na mgbasa ozi akwụ ụgwọ ị tinyere na weebụsaịtị. Ndị na-eme ihe ike na-enwekarị ikike ịme ka ha mata ma ha nwere ikike ịtụgharị atụmanya na mkpebi ịzụta. Ọ bụ ezie na ọ bụ ihe akpachapụ anya, na-etinye aka iji ruo ndị isi na-ege gị ntị karịa mgbasa ozi ọkọlọtọ, ịmanye ahịa na-aga n'ihu na-ewu ewu. Agbanyeghị, enwere esemokwu na itinye ego gị na influencer
Ọdịnihu Dị Mma nke Rlọ Ahịa
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ubi ahụla nnukwu ohere na ohere ọrụ na ọganihu na teknụzụ, ọrụ ndị na-ere ahịa ugbu a na-arị elu ma na-achọ ịbụ nhọrọ echedoro maka ọdịnihu. Otu n'ime ọrụ anọ dị na United States bụ na ụlọ ahịa ndị na-ere ahịa, mana ụlọ ọrụ a metụtara ihe karịrị ahịa. N'ezie, ihe karịrị 40% nke ọnọdụ dị na mkpọsa bụ ọrụ ndị ọzọ na-abụghị ahịa. Ọrụ 5 na-ebili elu